ပညာရေးနှင့် Porn - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက် - ဦး နှောက်ပလပ်စတစ်မှု၏အခန်းကဏ္။
ပညာရေး & Porn
ဘာလို့လဲဆိုတော့အင်တာနက်ပေါ်မှာရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးညစ်ညမ်းမှုကိုလွှင့်ထုတ်နိုင်ရေးဟာကလေးတွေအတွက်ပညာရေးအတွက်အရေးကြီးတယ်။ သို့သော်ပညာရှင်များသည် ဦး နှောက်ပလပ်စတစ်အလုပ်လုပ်ပုံကိုကျောင်းသားများအားသင်ကြားရမည်။
ကောင်းသောညစ်ညမ်းမှုကို“ မကောင်းသောညစ်ညမ်းသောအရာ” မှခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊
ပြaနာကို“ လိင်ကြင်ဖော်ဖက်အားညစ်ညမ်းသောလိင်ကိုမတိုက်တွန်းမီသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရယူရန်” သို့လျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်
ဘယ်လို“ ညစ်ညမ်းသောလိင်ကိစ္စသည်စစ်မှန်သောလိင်နှင့်မတူပါ။ ”
သူတို့ကို“ ကောင်းသော porn” ကြည့်ဖို့ပြောလိုက်ပါ။
“ ကောင်းသောညစ်ညမ်းသော / ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ” အယူအဆသည်လူတိုင်းကို“ တန်ဖိုးများ” နှင့်ပတ်သက်ပြီးအဆုံးသတ်ငြင်းခုံမှုများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ဒီအာရုံဟာအာရုံပျံ့လွင့်စရာပါပဲ
ထို့အပြင်အပျော်တမ်းညစ်ညမ်းမှုနှင့်“ လက်တွေ့ကျသော” ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရရှိနိုင်လျှင်ပင်ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်များသည်ထူးဆန်းပြီးစိတ်ပျက်စရာများကိုရှာဖွေလိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာအသစ်အဆန်းနဲ့ထိတ်လန့်မှုကိုထူးခြားစွာတုန့်ပြန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သောနှိုးဆွမှုကိုတုံ့ပြန်မှုနည်းပါးသည် - ပို၍ လျင်မြန်စွာ“ ပျင်းစရာ” ဖြစ်လာသည်။ ဒီဆယ်ကျော်သက် - ဦး နှောက်အစီအစဉ်ကိုနို့တိုက်သတ္တဝါတွေမှာတွေ့နိုင်တယ်။ မြီးကောင်ပေါက်များကိုဆယ်ကျော်သက်များအားသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေများနှင့်အိမ်ထောင်ဖက်များထပ်မံရှာဖွေရန် (မျိုးပွားခြင်းမပါဘဲ) အားပေးရန်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာသည်။ သို့သော်ဤအရာသည်ဆယ်ကျော်သက်များသည်ညစ်ညမ်းသော၊ အလွန်အစွမ်းထက်သော၊ လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသောလှုံ့ဆော်မှုများဖြင့်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုထုတ်လွှင့်ရန်ထူးခြားစွာအားနည်းချက်ဖြစ်သည်။
ပို၍ အန္တရာယ်များသည်မှာလူ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်လူငယ်များသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနေစဉ်အတွင်း ပို၍ အစွန်းရောက်သောပစ္စည်းများကိုပိုမိုမြင့်တက်လာနိုင်သည်။ ဦး နှောက်အတွင်းရှိ ဦး နှောက်အတွင်းရှိ ဦး နှောက်ထဲရှိနိုးကြားမှု / ဆုဆားကစ်များမှပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအချက်ပြမှုကြောင့်သူတို့၏ဆင်ခြင်တုံတရား ဦး နှောက်သို့အချက်ပြမှုများကိုနစ်မြှုပ်စေသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ယနေ့ porn porn အသုံးပြုသူများသည် fetish material အမျိုးမျိုးကို (အားဖြည့်) ရန်အဆုံးသို့တက်နိုင်သည်။ သူတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အနေနှင့်ဤပစ္စည်းကိုရှာဖွေရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှများစွာသောသူတို့သည်အစောပိုင်းအရသာများကိုအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်းတွေ့ရှိလာကြသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်သုတေသီများကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသူတစ်ဝက်သည်ယခင်ကသူတို့စိတ် ၀ င်စားမှုမရှိသော၊ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ: ယောက်ျားတစ်နမူနာအတွက်ပြဿနာနှင့် Non-ပြဿနာအသုံးပြုမှုပုံစံများတစ်ခုကရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလေ့လာမှု။
ဒါကဒီနေ့လူငယ်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူတွေကိုသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာတွေ၊ ဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်တရားမ ၀ င်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းစေသောယောက်ျားများထံမှကြားသိရပြီး“ ငါတကယ်ပဲလား” ဟူ၍ တွေးမိကြသည်။ လိင်တူချင်းချစ်တဲ့လိင်တူချစ်သူတွေဆီကလိင်တူချစ်သူတွေကိုအဓမ္မပြုကျင့်တာကိုကြည့်ပြီးကြည့်တာ လိင်တူချစ်သူတွေလိင်တူချစ်သူတွေကိုမုန်းတီးတဲ့ယောက်ျားတွေ၊ သူတို့ ဦး နှောက်ကိုဒီအရသာအသစ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါအုပ်စုနှစ်စုလုံးကတခါတရံထိတ်လန့်သွားပြီး၊ ကြည့်ပါ သင်ကသင့်ရဲ့ဂျွန်ဆင်ယုံကြည်နိုင်ပါသလား?
အခြားသူများကမူသူတို့ကလိင်တူချင်းချစ်သူလား၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကသူတို့ဟာ“ အားလုံးသိတဲ့သူ” ဟုတ်မဟုတ်သူတို့တွေးမိသည်မှာငယ်ရွယ်စဉ်ကပင်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအမြင့်ဆုံးအထိရောက်ရှိနေသောကြောင့်သူတို့၏နောက်ကွယ်တွင်မည်သည့်အရာသည်မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤပြproblemsနာများသည်အစောပိုင်းမျိုးဆက်များကြားသိခဲ့ရခြင်းမရှိဘဲသူတို့၏စမတ်ဖုန်းပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမှတစ်ဆင့်အဆုံးမသတ်နိုင်သောဝတ္ထုများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသော ဦး နှောက်ငယ်ရွယ်သော ဦး နှောက်၏အကျိုးဆက်ဖြစ်ပုံရသည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ လများစွာအင်တာနက်အင်တာနက်အရသာကိုအဆုံးမသတ်ဘဲဤအပေါ်ယံညစ်ညမ်းသောအရသာကိုလျော့နည်းစေပြီးလူများသည်သူတို့၏ပင်ကိုသဘာဝကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ (စိတ်ဝင်စားစရာမှာ၊ ငယ်ရွယ်သူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစတင်ထုတ်လွှင့်သည်၊ ကြာကြာ၎င်းသည်လိင်သဘာဝကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်ကြာလေ့ရှိသည်။ )
ဆိုလိုသည်မှာကလေးများသည်အေးစက်တည်ငြိမ်မှုမည်သို့အလုပ်လုပ်သည် (Pavlov ၏ခွေးများကိုသတိရပါ) ကိုကလေးများအားအသိမပေးလျှင်သူတို့၌ဖြစ်ပျက်နေသောအရာကိုနားလည်ရန်မူဘောင်မရှိပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကွန်ဒုံးမသုံးနိုင်ခြင်း၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခါတရံမိတ်ဖက်များနှင့်တဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်လာခြင်း၊ သန္ဓေတည်ခြင်းနှင့် anorgasmia နှောင့်နှေးခြင်း၊ ကြည့်သူတစ် ဦး ၏အရသာနှင့်၎င်းသည်ကြည့်ရှုသူအားမိမိ၏ပင်ကိုယ်၊ စစ်မှန်သောလိင်ကိုရှာတွေ့မှသာကူညီနိုင်သည်။ ဒါစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းတယ် အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်သော ဦး နှောက်များသည်အထူးသဖြင့်ပလပ်စတစ်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသူတစ်ဝက်ကသတင်းပို့မှာမဟုတ်ဘူး ပိုပြီးအစွန်းရောက်ပစ္စည်းမှတင်းမာမှုလျှော့ချ သုတေသီများမေးမြန်းဖို့စဉ်းစားသောအခါ။
အကယ်၍ အသုံးပြုသူများသည်ဆိုးရွားလှသည့်သတိပေးမှုမခံရပါက ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ ဦး နှောက်မြူ၊ စိတ်အပြောင်းအလဲများ၊ libido ယာယီဆုံးရှုံးခြင်းစသဖြင့်) သူတို့ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးသည့်နောက်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့်အတွက်မကြာခဏညစ်ညမ်းရောဂါကို“ ဆေးကုသ” ရန်မကြာခဏညစ်ညမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်သို့အမြန်ပြန်သွားလေ့ရှိသည်။ ကျန်းမာသတ်မှတ်ထားသောအချက်သို့၎င်းတို့၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်သွားဖို့ဖြစ်စဉ်ကို။
ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒီနေ့သင်ကြားတဲ့ဆရာဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသလဲ။ အဘယ်သူမျှမ, သူတို့ကထိုကဲ့သို့သောစွဲကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ် ဦး နှောက်ပလပ်စတစ်ကျွမ်းကျင်သူများကသူတို့ကိုယ်သူတို့ပညာပေးခဲ့ကြမဟုတ်လျှင်။ ဝမ်းနည်းစရာမှာပုံမှန်ကျောင်းမှအတိုင်ပင်ခံသည်ဤအလုပ်ကိုလုပ်ရန်ပညာမတတ်ပေ။
ကလေးတွေကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုခွင့်ပြုချက်ရဖို့သင်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကူးကကောင်းတယ်။ သို့သော်လူငယ်တစ် ဦး သည်သူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသည့်အခါစိုက်ထူမှုတစ်ခုသာရနိုင်သည်ဆိုလျှင်သူ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုသူ၏ထင်မြင်ချက်ပျက်ပြားသွားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ငယ်ရွယ်သောမိန်းကလေးများစွာသည်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားများအား 'no' ဟုပြောရန်သူတို့၏အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အယူအဆမရှိပါ။ အထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများတွင်များသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ သင်အမှန်တကယ်ကြိုက်နှစ်သက်သူတစ် ဦး အားအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရန်မိမိအားမိမိလိုအပ်သောအလေ့အကျင့်များ၌ပါ ၀ င်ရန်စိတ်မ ၀ င်စားကြောင်းပြောပြရန်လူကြီးမင်း၏စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှုရှိရန်လိုသည်။ အရွယ်ရောက်အမျိုးသမီးတွေတောင်မှဒီစိန်ခေါ်မှုနှင့်အတူအခက်အခဲရှိသည်။
တကယ့်ပြissueနာဟာကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်တဲ့မိန်းကလေးတွေကကူညီနိုင်ပါတယ်။ သူတို့က porn ကိုဖြတ်ချင်တဲ့သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါလုပ်ငန်းကိုမြန်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်တွေလိုမဟုတ်ဘဲ၊ Porn ဖြတ်ရည်းစား?5သိကောင်းစရာများ
မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကလေးတွေကို porn ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အန္တရာယ်များကိုနားလည်ရန်သဘောတူညီခကျြစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေထက်ပိုပြီးလိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ကရောဂါလက္ခဏာများ၏အမျိုးမျိုးကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်ပါတယ် နာတာရှည်အသုံးပြုသူများသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သတင်းပို့။ လက်ခံရရှိသည့်အဆုံးတွင်ဖြစ်လိုသည့်အရာ တစ်စုံတစ် ဦး က porn-fetish မောင်းနှင်အပြုအမူ။ တဦးတည်းလုလင်ကိုပြောခဲ့သကဲ့သို့,
မူးယစ်ဆေးဝါးပညာရဲ့ playbook ထဲကစာမျက်နှာကိုထုတ်ယူလို့ရလား။ ဘိန်းဖြူမည်မျှရှုပ်ထွေးနေသည်ကိုသင်သိရှိခြင်းသည်လူတို့အား (အများစု) ၏ပစ္စည်းများကိုဘယ်တော့မျှမထိရန်လုံလောက်သောမက်လုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ per se“ scare နည်းဗျူဟာများ” (နည်းနည်းရယ်စရာကောင်းသည်) မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်မိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးဆက်များကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနားလည်ထားခြင်းသာဖြစ်သည်။ နာတာရှည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုမှု၏နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကိုကျွန်ုပ်သိပါကကျွန်ုပ်၏အလေ့အကျင့်ကိုစွဲလမ်းသည့်အထိမည်သည့်အခါမျှခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ချေ။
သူတို့ကို porn သာစစ်မှန်သောလိင်ကဲ့သို့မပြောပါ
ကလေးများအား“ ညစ်ညမ်းသောလိင်ကိစ္စသည်စစ်မှန်သောလိင်နှင့်မတူပါ” ဟုသင်ကြားပေးခြင်းသည်ယုတ္တိရှိသော်လည်းပြsoundsနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ ညစ်ညမ်းသောလိင်ကိစ္စသည်တကယ့်လက်တွေ့မဟုတ်ကြောင်းကလေးများသိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင်ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံမရှိသော်လည်း၎င်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ အချို့သည်ဂျပန်ကာတွန်းရုပ်ပုံများနှင့်ပင်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ၎င်းသည်“ တကယ့်စစ်စစ်” မဟုတ်ကြောင်းသူတို့သေချာပေါက်သိသည်
သို့သော်ပိုမိုလေးနက်သောပြဿနာတို့သည်ဖြစ်ကြကြောင်း အေးစက် porn လိင်သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်နိုးထ။ လူငယ်များစွာသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမကြည့်ရှုဘဲစိုက်ထူ။ မရနိုင်ပါ။ အခြားသူများကသူတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများတွင်ပါဝင်ခြင်းနှင့်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားကန့်ကွက်ခြင်းမပြုပါကမတည်မငြိမ်နိုင်ပါ။ ကြည့်ပါ သုတေသနနုပျို ED အတွက်ကြီးမားမြင့်တက်အတည်ပြု.
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူငယ်များစွာသည်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမျိုးမရှိခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်လိင်မှုနှိုးဆွမှုသို့မဟုတ်ရေရှည်တည်တံ့မည့်ပူးပေါင်းပါ ၀ င်မှုကိုရှာဖွေရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသောကြောင့်ဖန်သားပြင်များ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်အသစ်အဆန်းများ၊ ထိတ်လန့်စရာကောင်းသောပစ္စည်းများ၊ ထို့အပြင် internet erotica မှတစ်ကိုယ်ရေရာဂစိတ်ဖြေသည့်မိန်းကလေးများသည်တူညီသောပြissueနာကိုသတင်းပို့ကြသည်။
တစ်နည်းအားဖြင့်လူငယ်များသည်အားကစားမှားခြင်းအတွက်လေ့ကျင့်နေကြသည်။ ပိုဆိုးသည်မှာသူတို့သည်မှားယွင်းသောအားကစားအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားထားကြောင်းကိုမသိရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုလအတန်ကြာရပ်တန့်သွားအောင်စမ်းသပ်မှုမလုပ်ရင်သူတို့သိမှာမဟုတ်ဘူး။ စစ်မှန်သောမိတ်ဖက်များကပိုမိုနှိုးဆွလာသည်ကို Tehy ကိုယ်တိုင်လေ့လာရန်လိုအပ်သည်။
ဒီ site ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးလူငယ်များစွာဟာဒီသတင်းအချက်အလက်ကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပြီးနှစ်လိုဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့အပြင်၊ သူတို့က ဦး နှောက်အကြောင်း၊ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာမောင်းနှင်အားတွေ၊ မညီမျှမှုသတိပေးဆိုင်းဘုတ်တွေအကြောင်းလေ့လာရတာကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးဖြတ်တောက်ခြင်းဟာ ဦး နှောက်ကိုပုံမှန်အထိခိုက်မခံနိုင်အောင်ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်မလဲ။ သူတို့သည်အခြေခံများကိုနားလည်ပြီးသည်နှင့်ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ပြီးတော့သူတို့ကပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်ရေးသားချက်များမှတဆင့်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဆုံးမlikeဝါဒပေးကြတယ်။ သင်သည်သူတို့၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပုံပြင်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဖတ်နိုင်သည် ဒီမှာ။ သို့မဟုတ် ဒီလူငယ်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။ တစ်ဦးပြန်လည်အသုံးပြုသူပြောခဲ့သကဲ့သို့,
ကျောင်းတွင်သူတို့သည်သစ်သားခုတ်လှဲရန်၊ သုတ်ပုဝါကိုမည်သို့ခုတ်။ ရွှံ့အိုးပြုလုပ်နည်းကိုသင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏နေ့စဉ်ဘ ၀ အတွက်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှဤကျွမ်းကျင်မှုများကိုမလိုအပ်ပါ။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်နှင့်စိတ်စွမ်းရည်တိုးတက်အောင်သင်ယူနိုင်သည့်အာရုံကြောသိပ္ပံသင်တန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုရှိခြင်းသည်ကောင်းပေသည်။ ဒါက ၁၃ နှစ်မှာဒါကအင်အားကြီးတယ်။
လိင်ပညာရေးသည်ရောဂါဗေဒလေ့လာမှုမည်သို့ဖြစ်ပေါ်သည်ကိုကိုင်တွယ်သည့်တိုင်မပြည့်စုံပါ။ porn ပညာရေးသည်ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်၏အားနည်းချက်များကိုသင်ကြားပေးရန်တောင်းဆိုသည် လိင်မှုကိစ္စသည်မည်သို့အဆုံးသတ်နိုင်ကြောင်းပြသရန်လိုသည်။ အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်များနှင့်ဘာမှမပတ်သက်သည့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒီဗီဒီယိုကပိုရှင်းပြသည် - ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ဦး နှောက်သည်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက် Porn - YouTube